डिम्पल गाला भएका युवतीहरुलाई किन मन पराउँछन् पुरुष ? – Ekathmandunepal
Homeपत्याउनै गाह्रोडिम्पल गाला भएका युवतीहरुलाई किन मन पराउँछन् पुरुष ?
१८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार २१:०० ekathmandu Nepal पत्याउनै गाह्रो 0
काठमाडौँ । दुनियामा कि त सिम्पलको चर्चा हुन्छ कि त डिम्पलको । तर आज यहाँ हामी सिम्पलको कुरा नगरी डिम्पलको चर्चा गर्नेछौँ । हाँसेको समयमा केही ब्यक्तिको गालामा प्वाल पर्छ जसलाई डिम्पल भनिन्छ ।
डिम्पल परेको गालाले सुनमा सुगन्ध थप्छ । र त्यो मुस्कुराहटलाई अझ तेजीलो बनाउन पुग्छ । दुनियामा साहेदै मानिस होलान् जस्लाई डिम्पल मन नपरोस् । तर डिम्पलको बारेमा शास्त्र र पुराणले आ आफ्ना तर्क दिएका छन् ।
व‌िष्‍णु पुराणका अनुसार हाँसेको समयमा जुन केटीको गालामा प्वाल पर्छ त्यसको बैवाहिक जीबन सुखमय हुन्छ । पति पत्नि बीच रामो्र सम्बन्ध बन्छ । तर केटीको ससुराल घरमा डिम्पललाई रामो्र मानिदैन ।
पुराणका अनुसार डिम्पल भएकी महिलाकी सासु हुदीनन् ।
यदि भइहालेको खण्डमा उनलाई धेरै दिन सुख मिल्दैन । ज्योत‌िषशास्‍त्रका अनुसार गालामा डिम्पल पर्नु जन्मने समयमा शुक्रको मजबुत स्थितिका कारण हो । शुक्र प्रे र यौनको कारक ग्रह हो । त्यसैले यस्ता केटीमा कामभाब बढी हुन्छ । यस्ता केटी बढी सुखि हुन्छन र डिम्पल भएका केटीको प्रेम सम्बन्ध धेरै मानिससँग रहन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
गाला हेरेरै थाहा हुन्छ स्वभाव, कसरी ? कुमार चौलागाई
चीनबाट आयात गरिएका कण्डम साह्रै सानो भयो भन्दै मन्त्रीले गुनासो गरेपछि, कम्पनीले दियो यस्तो जवाफ
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (543)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (521)
दिपीकाको पुरै शरिर काँप्न थालेको थियो (432)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (419)
बोइफ्रेन्ड संग सेक्स भिडियो कल गर्दै युवती । लिक… (273)
यस्तो सपना देखेमा तपाईंको मृत्‍यु छिट्टै हुदैछ भन्ने… (137)
यी ३२ गुण जो पुरुषमा हुन्छ त्यो पुरुष महापुरुष हुन्छ… (130)
मैले ढोका लगाउन भुलेछु , काकाले पुरै देख्नु भयो (1,390)
जोसमा होस् गुमाउदै आफ्नो कपडा खोल्दै नाङ्गिएर भिडियो… (972)
किन हात लाई दुख दिनु हुन्छ राजु बाबु हामि हुदा हुदै (859)
पाँच पाण्डबसँग द्रौपदीले मनाएको सुहागरात यस्तो रहेछ (719)
बिहानै नीता बाथरुममा नाङ्गै नुहाउँन थाली (659)